Fowsiyo ?madaxdii shirka Paris waxaan kala hadalnay inay naga tageeraan amniga iyo dhaqaalaha? – Radio Daljir
Diseembar 10, 2013 2:37 b 0
Paris, December 10, 2013 – Wasaaradda arrimaha dibedda ee Soomaaliya ayaa shaacisay in ay madaxda Afrika ee ka qayb-galay shirkii Paris ay u soo bandhigtay sidii Soomaaliya looga caawin lahaa dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan.
Wasiirka arrimaha dibedda Marwo Fowsiyo oo shirkaas ka qayb-gashay ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in ay wax badan isla meel dhigeen madaxdii shirka ka qayb-galay.
Marwo Fowsiyo ayaa xustay in ay la kulantay wasiiro dhowr ah oo ka socday qaar dalalka Afrika, waxayna balan-qaadeen in ay Soomaaliya ka caawin doonaan dhinaca amniga iyo xasiloonida.
Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha dhibaatadu ka jirto ee Afrika.
Xoghayaha guud ee Qaramada midoobey Bank moon oo shirkaas ka hadlay, waxaa uu beesha caalamka ugu baaqay in ay Afrika ka caawiyaan xasiloonida iyo horumarka, xili guul laga gaaray inta badan dhibaatooyinkii ka jiray qaarada.